कतारविरुद्ध नेपालले टस जित्यो, प्लेइङ ११ मा को–कोले पाए मौका? (LIVE) - Everest Dainik - News from Nepal
कतारविरुद्ध नेपालले टस जित्यो, प्लेइङ ११ मा को–कोले पाए मौका? (LIVE)
काठमाडौं, साउन ७ । सिंगापुरमा जारी आइसीसी टी–२० विश्वकप एसिया फाइनल छनोट अन्तर्गत कतार विरुद्धको खेलमा नेपालले टस जितेर ब्याटिङ रोजेको छ । प्रतिकूल मौसमका कारण पिचमा समस्या देखिएपछि खेल ढिला सुरु हुन पुगेको हो ।
खेल ७ः१५ मै सुरु हुनुपर्ने थियो । एसिया फाइनल खेल्ने पाँच राष्ट्रमध्ये नेपाल एक मात्र एकदिवसीय मान्यता प्राप्त पाएको टिम भएकाले उपाधि जित्ने बलियो सम्भावना छ । आईसीसी वरियतामा नेपाल ११ औं र कतार २१ औं स्थानमा छ ।
याे पनि पढ्नुस कतारसँग लज्जास्पद हारका ५ मुख्य कारण, अबको सम्भावना के छ ?